बहुउपयोगी वनस्पति तुलसी : घरेलु ओखतीदेखि वायु शुद्धीकरणसम्म – korea pati
July 1, 2020 Korea patiLeaveaComment on बहुउपयोगी वनस्पति तुलसी : घरेलु ओखतीदेखि वायु शुद्धीकरणसम्म
वास्तवमा तुलसी रोप्नुलाई धार्मिक आस्थासँग जोडिएको छ । तुलसी मात्र होइन, राम्रो वनस्पति रोप्नु आफैँमा पुण्यको काम हो । वनस्पति थरीथरीका हुन्छन् । सबैको आआफ्नै गुण हुन्छन् । त्यसमध्ये प्रकृतिमा यस्ता वनस्पति छन्, जो प्राणी जगतका लागि अतिउपयोगी छन् । जस्तो कि तुलसी ।
हामी देख्छौं घरको आँगनमा मठ बनाइन्छ । लिपपोत गरिन्छ । सफासुग्घर गरिन्छ । त्यसमाथि तुलसी रोपिन्छ। तुलसीलाई किन यसरी आँगनमा मठ बनाएर रोपिएको होला ? यसरी रोप्दा धर्म हुने हो ? पाप पखालिने हो ?
यी आस्थाका कुरा हुन् । तुलसीलाई घरको आँगनमा मठ बनाएर महत्वका साथ रोप्नुको पछाडि वैज्ञानिक कारण छन् । तुलसी, जसको आयुर्वेदमा उच्च महत्व छ । घर आँगनमा रोप्दा यसले शोभा मात्र बढाउँदैन, वायु शुद्धीकरण गर्नेदेखि औषधीय उपयोगसम्म गर्न सकिन्छ ।
बहुगुणी तुलसीलाई उचित संरक्षण गर्ने परम्परालाई हाम्रा पूर्खाहरूले धर्ममा जोडेका हुन् । धर्मसँग जोड्दा त्यो बढी प्रभावकारी र चिरस्थायी पनि हुने भएकाले यसो गरिएको हो । तुलसी जस्तो वनस्पति लोप नहोस् साथै हाम्रा पुस्तौंपुस्ताका सन्ततीले यसको महत्व बुझून् भन्नका लागि पनि यसरी रोपिएको हो ।
तुलसी सफा ठाउँमा मठ बनाएर रोप्नुको पछाडि यसको औषधीय महत्व पनि रहेको छ । तुलसीको पात, डाँठ हामी सोझै सेवन गर्न सक्छौं । यसरी खानेकुरालाई सफासुग्घर गरेर राख्नुपर्छ भन्ने पनि हो ।
तुलसी कुन दिशामा रोप्ने भन्ने पनि निर्धारण गरिएको छ । ससर्ती हेर्दा र सुन्दा यो आडम्बर वा वाहियात लाग्न सक्छ । तर तुलसी यस्तो वनस्पति पनि हो, जसले वायुलाई शुद्धीकरण गर्छ । त्यही कारण वायुको बहकाव कुन दिशाबाट हुन्छ भन्ने आधारमा यसलाई रोप्ने स्थान निर्धारण गरिएको हो ।
तुलसीलाई घरको सम्मुखमा रोप्नुपर्छ । यसलाई पूर्व वा उत्तर दिशामा रोप्नु राम्रो मानिन्छ । यसरी रोप्दा त्यसले वास्तु दोषको असर कम गर्ने धार्मिक विश्वास छ ।
ओखतीको रुपमा तुलसी
तुलसीको एक, दुई पात नियमित रुपमा सेवन गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने बताइन्छ । यसको साइड इफेक्ट केही पनि छैन । नियमित रुपमा तुलसीको पात चपाउन वा पानीमा उमालेर त्यसको पानी पिउन सकिन्छ । बालबालिकादेखि बुढाबुढी, रोगी जोकोहीलाई यसको सेवन गराउन सकिन्छ ।
चाहे रुघाखोकीमा होस् वा कफ जमेको बेला, ज्वरोमा होस् वा दाँतको रोगमा, तुलसी उपयोगी हुन्छ।
– तुलसीको पत्ताको तेलमा युजीनोल, मिथाइल युजेनल र क्यारियोफिलिन पाइन्छ । जसबाट पेन्क्रियाटिक बिटा सेल्सले राम्ररी काम गर्छ । यसको कारणले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा कायम रहन्छ र ब्लड सुगर पनि ठिक रहन्छ । यसले मधुमेह हुनबाट रोक्छ ।
-तुलसीमा एन्टी अक्सिडेन्ट र एन्टी कार्सिनोजेनिक गुण पाइन्छ । जसले स्तन क्यान्सर र मुखको क्यान्सर बढ्नबाट रोक्छ ।
– किड्नीको पत्थरी हटाउनका लागि बिहान तुलसीको रसमा मह मिलाएर पिउनुस् । ६ महिनासम्म यसरी पिउँदा किड्नीको पत्थरी मात्रै हट्दैन, यसबाट हुने दुखाइमा पनि आराम मिल्छ ।
-सासको दुर्गन्ध हटाउन पनि तुलसीको पत्ता सहयोगी हुन्छ। प्राकृतिक भएको कारणले यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि हुँदैन । यदि मुखबाट गन्ध आइरहेको छ भने तुलसीको केही पत्ता चपाउनुहोस् । तुरुन्तै गन्ध हटेर बास्ना आउन थाल्छ ।
– तुलसीको पत्ताको दुईदुई थोपा रस १४ दिनसम्म आँखामा हाल्दा रतन्धो ठिक हुन्छ । आँखाको पहेँलोपन पनि कि हुन्छ । तुलसीको पत्ताको रस गाजल जसरी आँखामा लगाउँदा आँखाको ज्योति बढ्छ ।
-सबै प्रकारको ज्वरोलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न तुलसी प्रभावकारी हुन्छ । २० तुलसीको पत्ता र १० वटा मरिच मिलाएर बनाएको काँडालाई पिउँदा पुरानोभन्दा पुरानो ज्वरो पनि छुमन्तर हुन्छ । पारासिटामोल र एन्टिबायोटिक्स लिनैपर्दैन ।
– कुनै पनि प्रकारको छालाको रोगलाई तुलसीले सजिलै ठिक पार्छ । तुलसी घोटेर प्रभावित ठाउँमा लगाउँदा छालाको रोग निर्मूल हुन्छ । तुलसीको पत्ताको रस रातमा अनुहारमा राम्ररी लगाउँदा डण्डीफोरबाट छुट्कारा मिल्छ।
कोरियामा आजमात्रै ५४ सङ्क्रमित भेटिए
July 1, 2020 Korea pati
पाककला : स्वादिलो र पोषिलो पनि
October 7, 2020 Korea pati